Hlola i-Carnival eRio de Janeiro - World Tourism Portal
Hlola i-carnival eRio de Janeiro
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-carnival eRio
Bukela ividiyo emayelana ne-carnival eRio
Umkhosi wawubanjwa minyaka yonke ngaphambi kokuLentwa futhi wawubheka njengomkhulu zomkhosi emhlabeni onabantu abayizigidi ezimbili ngosuku emigwaqweni. Umkhosi wokuqala weCarnival ku Rio kwenzeke ku-1723.
Okujwayelekile I-Rio carnival i-parade igcwele ama-revelers, amaflethi nokuhlobisa okuvela ezikoleni eziningi ze-samba eziseRio (ngaphezulu kwe-200 cishe, ihlukaniswe yaba amaqembu / amaqembu ahlukene). Isikole se-samba sakhiwa ngokubambisana komakhelwane bendawo abafuna ukuhambela imikhosi yomkhosi ndawonye, ​​ngohlobo oluthile lwesizinda, lwendawo kanye nolwejwayelekile.
Kunomyalo okhethekile okufanele wawulandelwa yisikole ngasinye lapho kufakwa umfundi wawo. Isikole ngasinye siqala ngegama elithi "comissão de frente" ("Front Commission" ngesiNgisi), lelo yiqembu labantu abavela esikoleni kuqala. Yenziwe ngabantu abayishumi kuya kwabayishumi nanhlanu, i- “comissão de frente” yazisa isikole futhi ibeka isimo nesimo sezethulo zabo. Lababantu basebenzise imidwebo ngemidwebo efashisayo evame ukuxoxa izindaba ezimfishane. Ukulandela i- "comissão de frente" yisikejana sokuqala sesikole samba, esibizwa nge- “abre-alas” (“Oping Wing” ngesiNgisi). Lokhu kulandelwa iMestre-sala nePorta-Bandeira (“Master of Ceremonies and Bendera Bearer” ngesiNgisi), ngababili ukuya kwabane, oyedwa osebenzayo nogcinayo abathathu, ukuhola abadansi, okubandakanya abashayeli bezindiza ezindala nabaqaphi "Ala das baianas", ne-bateria ngemuva nangezinye izikhathi isigaba se-bronze kanye namagitala.
Umkhosi wokugubha iRio Carnival ubuyela kuma-1640s. Ngaleso sikhathi, imikhosi evelele yayihlelelwa ukuhlonipha onkulunkulu bewayini abangamaGrikhi. AmaRoma ayevame ukukhuleka uDionysus noma uBacchus, unkulunkulu wokuvunwa kwamagilebhisi. Umkhosi 'we-Entrudo' wethulwa amaPutukezi futhi lokhu kugqugquzele ukuzalwa kweCarnival ngaphakathi Brazil. E-1840, okokuqala i-Rio masquerade kwenzeka, kwathi i-polka ne-waltz kwathatha indawo yesikhungo. Ngemuva kwalapho ama-Afrika abe nomthelela kwiCarnival ngokwazisa ngomculo we-samba ku-1917, manje esethathwa njengendlela yesiko lemisindo yaseBrazil.
ICarnival iqala ngolwesiHlanu bese iyaphela ngo-Ash ngoLwesithathu, kepha iWars Winer's 'Parade iyenzeka ngoMgqibelo ngemuva kokuphela komkhosi womkhosi. Isikole esinqobile nabagijimeli beQembu Elikhethekile, kanye nompetha we-A Series, bonke bamasha ngesikhathi esedlule kulobubusuku.
Njengoba lo mqhudelwano wenzeka eSambadrome futhi amabhola ebanjwa eSigodlweni saseCopacabana nasebhishi, abahlanganyeli abaningi bomkhosi bakwezinye izindawo. Imikhosi yasemgwaqweni ijwayelekile kakhulu ngesikhathi se-carnival futhi ihlala abantu bendawo kakhulu. I-Elegance kanye nehaba ngokweqile kuvame ukushiywa ngemuva, kepha umculo nomdanso kusavame kakhulu. Noma ngubani uvunyelwe ukubamba iqhaza emikhosini yasemgwaqweni. Amabhendi ajwayelene kakhulu nomgwaqo zomkhosi ikakhulukazi ngoba akusizi lutho ukujoyina ubumnandi ngaphandle kokugxumela ngaphakathi. Elinye lama-bandas abaziwa kakhulu eRio yiBanda de Ipanema. IBanda de Ipanema yadalwa okokuqala kwi1965 futhi yaziwa njengebhande lomgwaqo elingahloniphi kakhulu laseRio.
Kuhlanganiswe kuzo zonke izici ze Rio i-carnival iyadansa nomculo. Umdanso owaziwa kakhulu yi-carnival samba, umdanso waseBrazil onethonya lase-Afrika. I-samba ihlala ingumdanso odumile hhayi kuphela kwi-carnival kodwa kuma-ghettos angaphandle kwemizi enkulu. Lamadolobhana agcina ephila isici esingokomlando somdanso ngaphandle kwethonya lamasiko asentshonalanga.
Umculo kungenye ingxenye enkulu yazo zonke izici ze-carnival. Njengoba kushiwo yiSamba City, "Amathuluzi weSamba we-Samba ayingxenye ebalulekile ye Brazil futhi Rio de Janeiro I-Carnival, ukuthumela ubuhlalu obungenakuqhathaniswa nemigqumo eyenza isixuku siqhume emicimbini wokudansa onemibala ehlekisayo yemfashini ”. I-samba etholakala eRio yiBattucanada, kubhekiselwa kumdanso nomculo osuselwa ezinhlotsheni ze-percussion. "Kuzalwa ngesidingo esinesigqi sokuthi ikuvumela ukuba ucule, udansele futhi ubukeke ngasikhathi sinye." Yingakho isitayela se-batucada sitholakala kuwo wonke ama-Rio asemgwaqweni.
Imigwaqo yasemgwaqweni, ama-blocos, kanye nama-bandas kwenzeka kulo lonke idolobha laseRio ngesikhathi seCarnival, umgubho womkhosi we-carnival owaziwa kakhulu futhi omkhulu emhlabeni. Kungaba ngaphezu kwama-bandas we-300 okwenzeka kunoma yiliphi iphuzu ngesikhathi. Ngenkathi umcimbi omkhulu womgwaqo wenzeka ngqo ngaphandle kweSambadrome, umdanso omkhulu kakhulu ohleliwe wasemgwaqweni utholakala eCinelândia Square eCentro Rio.
Lapho iSambadrome yakhiwa e1984, yaba nemiphumela emibi yokuthatha imigwaqo yasemgwaqweni ukusuka endaweni ephansi kuya endaweni ethile, enamathikithi okusebenza. Ezinye izikole ze-samba selokhu zashukunyiswa uhlelo olugxile ekutholeni kabusha indawo yomphakathi, kanye nokusebenzisa isiko le-carnival ukungena emigwaqweni ngama-parade noma ama-blocos. Iningi lalaba limelele umphakathi wendawo wakule ndawo kodwa uvulekele bonke.
INdlovukazi yeCarnival in Rio de Janeiro futhi amakhosazana afinyelela kwababili anomsebenzi wokwenza umbuthano omnandi, kanye neNkosi uMomo. Ngokungafani namanye amadolobha, edolobheni iRio de Janeiro, iQueens of Carnival asiboni isikole esithile se-samba. Emincintiswaneni, amakhosazana kuvame ukubekwa njengokwesibili nokwesithathu, futhi ngokulandelanayo i-1st ne-2nd Princess. Abanye babo ngemuva kokubusa baba ngundlovukazi noma abashadikazi bebhethri.